जुवा प्रकरण: कांग्रेस नेता पक्रिए, प्रहरी संक्षरणमा मुख्यमन्त्रीका स्वकीय फरार! :: PahiloPost
जुवा प्रकरण: कांग्रेस नेता पक्रिए, प्रहरी संक्षरणमा मुख्यमन्त्रीका स्वकीय फरार!
9th May 2018, 02:44 pm | २६ बैशाख २०७५
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका प्रमुख स्वकीय सचिव वीरबहादुर कुँवर ‘सुरेश पहाडी’ जुवा खालबाट फरार भएका छन्। प्रहरीकै संरक्षणमा उनलाई जुवाको खालबाट भगाइएको प्रत्क्षदर्शीले बताएका छन्।
मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव भएको पहिचान भएलगत्तै प्रहरीकै मिलेमतोमा उनलाई भगाएर अन्य व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको प्रत्यक्षदर्शीको भनाई छ। जुवाखालबाट उनका दुई वटा मोबाइल सेट बरामद गरेको ४ दिन बितिसक्दासमेत उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले आलटाल गरिरहेको छ।
यता, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी उपरीक्षक उमाप्रसाद चुतुर्वेदीले प्रहरीले नभगाएको दाबी गरे। प्रहरीकै संरक्षणमा भगाइएछ नि भन्ने जिज्ञासामा उपरीक्षक चतुर्वेदीले भने, ‘जसले भनेको उसैलाई सोध्नुस्, यो विषयमा मलाई नसोध्नुस्।’
प्रहरीले त्यस्तो काम गर्नै नसक्ने दाबी गर्दै उनले थपे, ‘प्रहरीले त्यस्तो पनि गर्छ? अहिले पनि खोजतलास भइरहेको छ, भेटिए पक्राउ त गरिहाल्छौं।’
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नंं ९ लाटीकोइलीबाट गत २३ गते कांग्रेस नेताको घरमा जुवा खेलिरहेका कुँवर फरार छन्। प्रहरीले जुवा खालबाट कांग्रेस नेतासहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले छापा मार्दा कांग्रेस नेता घरधनी ५९ वर्षीय कालीप्रसाद शाक्य, ५५ वर्षीय दानबहादुर गुरुङलाई जुवा खालबाट पक्राउ गरेको थियो। जुवाखालबाट ३४ हजार पाँच सय नगद पनि बरामद गरेको थियो। पक्राउ परेकालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको हिरासतमा राखिएको छ।
जुवा प्रकरण: कांग्रेस नेता पक्रिए, प्रहरी संक्षरणमा मुख्यमन्त्रीका स्वकीय फरार! को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।